Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed oo howlgal ku dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed oo howlgal ku dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab
Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed oo howlgal ku dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab
Buulaburde (Halqaran.com) – Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya ayaa Isniintii maanta howlgallo ka dhan maleeshiyaadka Ururkja Al-Shabaab ka billaabay waddada u dhaxeeysa degmooyinka Buulabarde iyo Jalalaqsi halkaas oo Xubno ka tirsan Shabaab dhowr jeer ay weerarro ka fuliyeen.
Jeneraal Axmed Maxamed Tareedishe, taliyaha qeybta 27-aad ee Ciidamada Dowladda iyo saraakiil kale oo ka tirsan Qeybta 27-aad ee ayaa sheegay in howlgalka ay Khasaare xooggan gaarsiiyeen Al-Shabaab kuwaasi oo ku sugnaa inta u dhexeeysay magaalooyinka Buuloburde iyo Jalalaqsi ee gobolka hiiraan.
Taliyaha guutada 5-aad qeybta 27-aad Gaashaanlle Sare Maxamuud Xasan Ibraahim (Baakaay) oo la hadlay warbaahinta Dowladda ayaa sheegay in howlgalka lagu dilay 11- ka mid Al-Shabaab, kuwaas oo dadka dhibaateyn jiray sida uu hadalka u dhigay.
Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgalkan ka fuliyeen deegaanka lagu magacaabo Buurweyn oo u dhexeeya degmooyinka Buulburde iyo Jalalaqsi. waxaana laba maalin ka hor uu dagaal ku dhex-maray Ciidamada Dowladda iyo Al-Shabaab.
Xubno al-shabaab oo la dilay